Universal Online TV | किन रङ फेर्छ रारा ताल? किन रङ फेर्छ रारा ताल?
किन रङ फेर्छ रारा ताल?
मौसम अनुसार दिनमै चार पाँच चोटी फेरिने राराको पानीको रङ्गमा मिसिन आइपुग्छ सिन्जे र कान्जिरोवा हिमालको छाँया। अनि रारा साँच्चिकै धर्तीको स्वर्ग, स्वर्गको अप्सरा देखिन्छ।